Luis Suarez oo noqday xiddiga saddexaad ee ugu goolasha badan Kooxda Barcelona Taariikhda horyaalka La Liga – Gool FM
(Barcelona) 15 Sebt 2019. Luis Suarez ayaa noqday ciyaaryahankii saddexaad ee goolasha ugu badan u dhaliyey taariikhda horyaalka La Liga kooxda Barcelona, kaddib markii uu xalay goolal dhaliyey.
Weeraryahanka reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii ay xalay kooxdiisa Barcelona 5-2 uga adkaatay Valencia ee horyaalka La Liga.
Luis Suarez ayaa sidaas xalay ku dhaliyey goolashiisii 133 ee horyaalka, waxaana uu kaalinta saddexaad ka soo galay liiska xiddigaha ugu goolasha badan kooxda Barcelona horyaalka La Liga, waxaana kaliya ka sarreeya labo ciyaaryahan.
Labada xiddig ee Suarez kaga sarreeya goolasha horyaalka La Liga ee kooxda Barcelona waa César Rodríguez iyo Lionel Messi.
César Rodríguez ayaa kaalinta labaad kaga jira xiddigaha ugu goolasha badan kooxda Barcelona ee taariikhda horyaalka La Liga waxaana uu Barca kulammada horyaalka u dhaliyey 190 gool.
Kabtanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa ah laacibka ugu goolasha badan horyaalka La Liga kooxda Catalan, waxaana uu kaalinta koowaad ku fadhiyaa 419 gool oo horyaalka ah oo uu u dhaliyey naadiga ka dhisan garoonka Camp Nou.